Home » My Dear Diary » ဘ၀တစ်ကွေ့မှာ ခဏတွေ့ကြရာဝယ်
Posted by ရွှေမိုးတိမ် on Oct 22, 2013 in My Dear Diary | 13 comments
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အဓိကဇာတ်ကောင် က ဒီခေတ်ရဲ့ social network ဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ့ ။ facebook သုံးရင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တင်ထားတဲ့ ပို့စ် တစ်ခုတွေ့တယ် ။ ချစ်စရာအရမ်းကောင်းတဲ့ ခွေးကလေးနှစ်ကောင် ။ နှစ်ကောင်လုံးယူတဲ့ သူကို ပေးမယ်ဗျာ တဲ့ ။ ကိုယ်က တွေ့တဲ့ သတ္တ၀ါတိုင်းကို အသနားပိုတတ်သူမို့ပဲလားမသိဘူး ။ အဲ့ဒီခွေးလေးနှစ်ကောင် ကို မြင်မြင်ချင်းကို အရမ်းချစ်သွားမိတယ် ။လိုလဲလိုချင်တယ် ။ အိမ်မှာ ကြောင်လေးတွေမွေးထားတာ ခုနှစ်ကောင်ရှိပေမယ့် ခွေးတော့ တစ်ခါမှ မမွေးဖူးဘူး ။သူတို့ကို အရမ်းချစ် အရမ်းလိုချင်တဲ့ စိတ်ကတစ်ဖက် ၊ နေရတာက အစိုးရတိုက်ခန်း … နဂိုကမှ ကြောင်တွေမွေးလို့ အမြင်သိပ်မကြည်ကြတာ ခုခွေးတွေနဲ့ဆို ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကတစ်ဖက် ၊ ကြောင်နဲ့ခွေး တည့်ကြပါ့မလားလို့ တွေးပူမိတဲ့စိတ်က တစ်ဖက် …. အဲလို ချီတုံချတုံ စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲ “င့ါကိုပေးပါလား ဟယ် ၊နှစ်ကောင်လုံး ငါမွေးပါ့မယ် “ လို့ ကွန်မန့်ရေးမိရက်သားဖြစ်သွားတယ်။
သူငယ်ချင်းက ချက်ချင်းတော့ မပေးပါဘူး ။ အခြေအနေကြည့်နေပုံရတယ် ။ လိုချင်တဲ့သူတွေကလဲ အများသားကိုး။ တစ်ဖက်လောက် ကြာတော့မှ သူကဖုန်းဆက်လာတယ် ။ နင့်ကိုပေးမယ်တဲ့ ။ ကိုယ် အရမ်းပျော်သွားတာပေ့ါ ။ ဖေဖေရယ် မေမေရယ် ကိုယ်ရယ် ခွေးလေးတွေကို သွားခေါ်ကြတယ် ။ အိုးး စွာလိုက်တာဆိုတာ ။ ကိုယ်တို့ကိုဟောင်တာပေ့ါ ။ နှစ်ကောင်လုံး အမ လေးတွေ ။ သူတို့ မေမေ က သူတို့ကို မွေးပြီးကတည်းက ဆုံးသွားသတဲ့ ။ အမိမဲ့ကလေးတွေပေ့ါလေ ။ အရွယ်ကတော့ လေးလလောက်ရှိပြီပြောတယ် ။ တစ်ကောင်က အမဲလေး ၊ တစ်ကောင် ကအနီလေး ။ အမဲလေး ကို ဂူဂူး ၊ အနီလေး ကို ပူစူး လို့ နာမည်ပေးလိုက်ကြတယ် ။ ဂူဂူးလေး က မျက်ခုံးမှာ အနီပြောက်လေးပါတော့ မျက်ခုံးမွှေးလေးလိုပဲ ချစ်စရာအရမ်းကောင်းတယ်။ ပူစူးကတော့ ရယ်လဲရယ်ရ ချစ်ဖို့လည်းကောင်း …သူ့ခမျာ အောက်သွားလေးတွေခေါနေရှာတယ် ။ အိမ်ကို စစရောက်ချင်း မေမေနဲ့ ဖေဖေ အိပ်တဲ့ အခန်းထဲ တန်းဝင်ပြေးပြီးကုတင်အောက်မှာ ပုန်းနေကြတယ် ။ ဘယ်လိုမှခေါ်မရဘူး … လူကို တဂူးဂူး တဂဲဂဲနဲ့ ကိုက်မယ်လုပ်တယ် ။ သူတို့လဲ အိမ်အသစ်ဆိုတော့ ကြောက်ရှာမှာပေ့ါ ။ အဲဒီ့နေ့က ညစာဘယ်လိုမှ ကျွေးမရဘူး ။ကုတင်အောက်ကကို ထွက်မလာကြဘူးလေ ။ ညနက်တော့ ပူစူး ကို ခေါ်လို့ရသွားတယ် ။ သူ့ကိုပွေ့ပိုက် စောင်လေးနဲ့ထွေးပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ သိပ်တော့ အိပ်ပျော်သွားရှာတယ် ။ ဂူဂူးကိုလည်း ကုတင်အောက်က ချော့ပြီးထုတ်ရတာပေ့ါလေ ။ နှစ်ကောင်လုံး ကုတင်ပေါ်ရောက်လာပြီး လူနဲ့ တူတူ သိပ်လိုက်တယ် ။ ကိုယ်တို့ကို သိပ်တော့ မရင်းနှီးသေးဘူးပေါ့ ။
မနက်မိုးလင်းတော့ မနက်စာ ထမင်းဆီဆမ်း ပဲပြုတ် နဲ့ ငါးခြောက်ဖုတ် စားကြတယ် ။ သူတို့ကို ၀ါးကျွေးတော့ နှစ်ကောင်သား စားလိုက်ကြရှာတာ ။ ညကမှ မစားထားရပဲကိုး။ဖေဖေ ရော မေမေရော ကိုကိုရော မမရော မနေရပါဘူး ။တလှည့်စီကိုဝါးကျွေးရတော့တာပဲ ။ သူတို့ ထမင်းစားလို့ အဲ့ဒီနေ့က တစ်အိမ်လုံး ပျော်ကြတယ် ။
ဂူဂူးနဲ့ ပူစူးရောက်လာတဲ့ နေ့က စပြီး တစ်အိမ်လုံးမှာ အသံတွေကို ညံနေတာပဲ ။ သူတို့နှစ်ကောင်ဟာလေ နောက်မှ ရောက်လို့သာပဲ ။ အိမ်ကကြောင်တစ်ကောင်ကောင်ကိုများ ချီလိုက်ရင် သူတို့မကြိုက်ဘူး ၀ိုင်းဟောင်တာပဲ ။ မနာလိုဘူးပေါ့လေ သူတို့ကိုပဲချစ်ပါပေါ့ ။ စားလည်းစား ၊ ဆော့လည်း ဆော့ ၊ ချွဲလည်းချွဲတတ်တဲ့ သူတို့နှစ်ကောင် က တစ်အိမ်လုံးရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်နေတာပဲပေ့ါ ။ ဖေဖေရုံး ကပြန်လာရင် လဲ သူတို့ လှေကားကနေကြိုတယ် ။ ကိုယ်တို့နေရတာက လေးထပ်တိုက် အပေါ်ဆုံးအခန်းမှာကိုး ။ မေမေကျောင်းကပြန်လာရင် လဲ သူတို့ ကြိုတယ် ။ ကိုယ်များ ပြန်လာလို့ကတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေ့ါ အမြှီးလေးတွေ လှုပ်လှုပ်ပြီး သံဇကာ တံခါးမှာ မတ်တပ်လေးတွေ ရပ်ပြီး နှစ်ကောင်လုံး ပြိုင်တူကြိုကြတာ။ ကိုယ် က သူတို့ကို ကိုယ့်ကလေးတွေလိုပဲ သဘောထားတယ် ။ ခွေးတွေ ကြောင်တွေရယ်လို့ကို မမြင်တော့ဘူး။
ကြောင်လေးတွေ ကသူတို့ဟာသူတို့ အောက်ဆင်းအပေါ်တက် သွားတတ်လာတတ်တယ် ။ မွေးတည်းက ဒီအိမ်မှာ မွေးတာကိုး ။ ဂူးနဲ့ပူစူးကတော့ မနက်ဆို သူတို့ကိုခေါ်ပြီး အောက်ဆင်းပေးရတယ် ။ ခြံဝင်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲပဲ လှည့်ပတ်လမ်းလျှောက်ကြတာပေ့ါ ။ ခြံဝင်းအပြင်ကိုတော့ မထွက်ခိုင်းဘူး ။ ပြီးရင် လှေခါးပေါ်ပြန်တက် ။ စစချင်းကဆို ပူစူးမလေးဟာ လှေခါးကို မဆင်းရဲ မတက်ရဲ ဘူး ။ နောက်ပိုင်းတော့ သူ လုပ်တတ်လာတယ် ။ သူ လှေခါးဆင်းတာရော တက်တာရော အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲ ။ သူက ဂူဂူးထက်ပိုဝတော့လေ ။ တုတ်တုတ် တုတ်တုတ်နဲ့ ။ သူတို့ ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးတုန်းကဆိုလဲ နှစ်ကောင်လုံး လိမ်မာလိုက်တာလေ ။ တစ်ချက် မဟောင်ဘူး ။ ကိုယ်ကချီထားပေးပြီး ဆရာဝန် က ဆေးထိုးလိုက်တာပေါ့ ။ ဒီလကုန်ခါနီး ကို တစ်ခေါက်ထပ်ထိုးရမယ်တဲ့ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ က ဂူး နဲ့ ပူစူး ကို ကိုယ်တို့ ရေချိုးပေးကြသေးတယ်။ ပထမဆုံးရေချိုးကြတာဆိုတော့ သူတို့ ကနည်းနည်းထွက်ပြေးချင်သေးတယ် ။ ဘယ်ရမလဲ ဒီ မမ က သေသေချာချာ ဆပ်ပြာတွေတိုက်ပြီး ၀ရန်တာထွက် နေပူထဲမယ် ရေခြောက်အောင်သုတ်ပေးလိုက်တော့ နှစ်ကောင် သား မွှေးကြိုင်ပြီး ပျော်မြူးနေလိုက်တာများ ….
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်နဲ့ သူတို့ သံယောဇဉ်တွေ အထပ်ထပ်ရစ်တွယ်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလာခဲ့ကြတာပေ့ါ။
မနက်ခင်းတစ်ခု ….ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုမှ မေ့မရနိုင်တော့မယ့် မနက်ခင်းတစ်ခုမှာပေါ့ ။ မေမေ က ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှုပွဲအတွက် လာကြိုတဲ့ကားပေါ်ကိုတက်တယ် ။ ကိုယ် က အမှိုက်ထုတ်တွေ ဆွဲပြီး အောက်ဆင်းဖို့ပြင်တယ် ။ ဂူး နဲ့ ပူစူး က တံခါးဖွင့်တာနဲ့ အောက်ဆင်းရမှာမို့ ပျော်မြူးနေကြတယ် ။ မေမေ က အောက် ခေါ်သွားရမလားလို့ မေးတယ် ။ ကိုယ်က မခေါ်သွားနဲ့ ။ ကိုယ်နဲ့မှ တူတူဆင်းမယ်လို့ ပြောတုန်းရှိသေး ပူစူး ကလှေကားတစ်ဝက်ရောက်အောင်ပြေးဆင်းသွားတယ် ။ ဒါနဲ့ မေမေ လဲ လိုက်ဆင်းသွားတာပေါ့ ။ ကိုယ် လဲ နောက်က လိုက်လာခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီချိန် အဲ့ဒီချိန် မှာပေါ့ … စူးစူးဝါးဝါးအော်လိုက်တဲ့ မိန်းမသံတစ်ခု ….
ခွေးကလေး ကားတိုက်သွားလို့တဲ့ ။ ကိုယ့်ကလေးတွေလေ … လှေကားထစ်တွေကို ၀ုန်းဒိုင်းကြဲပြေးဆင်းလိုက်မိတယ် ။ ဒီ အချိန်ခဏလေးအတွင်း မှာလေ ။ ကိုယ်မြင်လိုက်ရတော့ ပူစူး ဟာ အသက်မရှိတော့ဘူး ။ ကလေး ဟာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တော့ ဖြစ်မသွားရှာဘူး ။ မျက်လုံးလေးပွင့်လို့ ။ ပူစူးသေသွားပြီ ဆိုတာ လက်ခံဖို့ တော်တော်ကို ခဲယဉ်းတယ် ။ ခုဏကလေးတင် ကိုယ်နဲ့ဆော့ကစားနေခဲ့တာ ၊ ကိုယ့်ပေါ် ဖက်တွယ်တက်နေခဲ့တာ ၊ကိုယ့်ရှေ့ကနေလှေကားတွေကို ပြေးဆင်းသွားခဲ့တာ မို့လား ။ ဒါပေမယ့် ဒါက ဖြစ်ပြီး သွားခဲ့ပြီတဲ့ ။ ကိုယ် သူ့မျက်လုံးတွေကို ပိတ်ပေးဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပိတ်ပေးလို့မရခဲ့ဘူး ။ ကိုယ် အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် ငိုလို့မရခဲ့ဘူး ။ ပူစူး ကို ဒီတိုင်းတော့ မပစ်ရက်နိုင်ဘူး ။ သူ့ကို ကိုယ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး သဂြိုဟ်ပေးချင်တယ်။ မြေမြှုပ်ဖို့ စဉ်းစားတော့ မှ မြေပိုင်မရှိတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ခါးသီးမိတယ် ။ အများ က ငြိုငြင်ကြမယ်လေ …
နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ရှေ့ထောင့် ခြံဝင်းအပြင်ဘက် ပိတောက်ပင်ကြီးအောက်မှာ တွင်းတူးပြီး ပူစူးလေး ကို မြေမြှုပ်ပေးခဲ့တယ် ။ကိုယ်တတ်သမျှ ဘုရားစားတွေရွတ်ပြီး ကလေး ဘ၀ကူးကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ကလေး တွင်းလေးကို မြေပြန်ဖို့တော့ မြေစိုင်မြေခဲတွေနဲ့ အတူ ကိုယ့် မျက်ရည်တွေပါ တွင်းထဲ ကို ကျတယ်။ ကိုယ့် အပြစ် မကင်းလို့ သာ ကလေး က အပြင်ကိုထွက်သွားတာ ။ ကိုယ့် ကြောင့် ကလေး သေရတာလို့ တွေးမိတိုင်း ဘယ်လိုမှ စိတ်မကောင်းနိုင်ဘူး ။ ကလေး ဟာ ငယ်ငယ်လေး၇ှိသေးတာမို့လား ။ ကလေး က ဘယ်ဘ၀ရောက်သွားမှာလဲ ။ သူတစ်ကောင်တည်းကြောက်နေရှာမှာပေါ့ ။ ဘယ်လိုနာကျင်မှုတွေများ ခံစားလိုက်ရမှာပါလိမ့် ။ ကလေးက သေးသေးလေးမို့လား …. ကိုယ့်အတွေးတွေ မဆုံးနိုင်ဘူး ။ ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာလဲ ပူစူးလေး ရဲ့ ပုံတွေပဲမြင်ယောင်နေမိတယ် ။ ကိုယ် ဟာ စိတ်နဲ့ လူနဲ့ မကပ်ဘူး ။ အမြင်အာရုံတွေကလဲ မျက်ရည်တွေကြောင့် အမြဲတမ်းေ၀၀ါးနေသလိုပဲ ။ အမှန်ဆို ပူစူးလေး ဟာ ကိုယ်နဲ့တူတူ အကြာကြီးနေရဦးမှာ ။ ကိုယ့်ကို ချွဲနွဲ့ဆော့ကစား ရဦးမှာ ။ အခုဆောင်းဝင်မှာ ကိုယ်ဝယ်ပေးတဲ့ အင်္ကျီအသစ်လေးကို ၀တ်ရဦးမှာ …
ကိုယ်တို့အိမ်လမ်း ပေါက်ဝ က ထီဆိုင် ကိုမြင်တော့မှပဲ ကိုယ်ဟာ အိမ်နားရောက်နေပြီဆိုတာ သတိရတော့တယ်။ ရုံးကအပြန်မှာ ကိုယ်ဟာသိစိတ်မဲ့ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာခဲ့တာပါလား ။ ပူစူးလေး ကပဲကိုယ့်အာရုံတွေကို လွှမ်းမိုးထားခဲ့တာ ။ ကိုယ် ဆိုင်ကယ် ကို ကွေ့လိုက်တယ် …. အို ရှေ့တည့်တည့် က ကားကြီးဟာ ကိုယ့်နားရောက်မှ ဘွားခနဲ ပေါ်လာခဲ့တာလား ။ ကိုယ် ဘယ်လိုမှ ရှောင်ဖို့ အချိန်မရပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ ကားကြီးနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ် ။ အလို .. ကိုယ် စိတ်ထင်လို့ပဲလား ။ ကားရှေ့ခန်းထဲ မှာ ကိုယ့်သမီးလေး ပူစူး ပါတယ် …… ပူစူးရေ လို့ ကိုယ် အော်ခေါ်လိုက်တယ် ။ ကိုယ့်သမီးလေး ပြန်ထူးသံ ဟာ အခါတိုင်းလို ၀ုတ် ၀ုတ် မဟုတ်ဘဲ ဂျိန်း ကနဲပါပဲလား ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ် နဲ့ သမီးလေးနဲ့ ပြန်တွေ့ရပြီ ။ ကိုယ်ကရှေ့ကပြေးတယ် သမီးလေး ကနောက်ကလိုက်တယ် ။ ပူစူးလေး တစ်ကောင်တည်းမဖြစ်တော့ဘူး ။ ပူစူး ဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။။။ ပူစူးရေ …သမီးရယ် မမရယ် နေရာသစ်တစ်ခုမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွင် နဲ့ တူတူ နေကြတာပေါ့ကွယ် ………
ရင်နင့်စရာ လေးးး ရေးတတ်လိုက်တာဗျာ
ဝတ္ထုတိုလေးပဲ ဖြစ်ပါစေ နော်
ကျွန်တော်လဲ ၀တ္ထုတိုလေးပဲ ဖြစ်စေချင်မိတယ်။
real event နဲ့
hard truth နဲ့ပါတွဲ
မျက်ရည်ပွဲတောင် နွှဲ ချင်ချင်………
ထင်တော့ထင်တယ် အဆုံးကိုကျော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာ။ ကြားထဲကသံယောဇဉ်တွေမဖတ်ရဲလို့။ ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူး :bvee:
ဂျိန်း .. ကနဲ​တော့မလုပ်​လိုက်​ပါနဲ့ဦးဗျာ…
ခုလို ပို့စ်လေးကို လာဖတ်ပြီး ထပ်တူခံစားပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။
အချိန် ကို သမားတော် လို့ တင်စားသလိုမျိုး … စဖြစ်ဖြစ်ခြင်းနေ့ကနေ တစ်ရက် ၊ နှစ်ရက် ၊ သုံးရက် ၊ ဒီနေ့ဆို လေးရက်မြောက်နေ့ပေါ့ ။ ပူဆွေးသောကရောက်တာတွေ ပျောက်မသွားသေးပေမယ့် စစချင်းနေ့ကလိုတော့ ဖြေမဆည်နိုင် ဘာမှမလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင် မဖြစ်တော့ဘူး ။ သေခြင်းတရားဆိုတာ ကိုယ့်အလှည့်လည်းရောက်လာဦးမှာပါပဲလို့ပဲ ….
အင်း..100% ခံစားရပါတယ်…..အိမ်ကပိုးမွေးသလိုမွေးထားတဲ့ခွေးကလေးကိုလဲ ..လူများအဆိပ်တုံးလာပစ်သွားတာ….ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့..သေပါရောလား….အလောင်းလေးကို ပွေ့ပြီး ..အဖေမျက်ရည်ကျနေတာမြင်တော့….ညီအစ်ကိုတွေများ…အဆိပ်တုံးပစ်သွားတဲ့ဘေးအိမ်ကကောင်ကို..ဓါးတွေနဲ့လိုက်တာ…..အဟိဟိ…ခွေးထက်မိုက်တယ်ဆိုတာ…ကိုယ်တွေမှအစစ် …အဟိဟိ
အဖြစ်ချင်းတူတာတွေတော့ များနေပြီဗျာ ။ ကျနော့်မှာလဲ အရင် က ကြောင်ကလေးလေ ဖိုးဖြူဆိုတာ … တစ်နှစ်ကျော်သားလောက်မှာ အဆိပ်မိလာသတဲ့ ။ ကျနော်က အဲ့နေ့ က ရုံးကအချိန်ပိုရှိလို့ ည 11 ထိုးခါနီးမှ ပြန်ရောက်လာတာ ။ သူက ညနေကတည်းကအဆိပ်မိပြီး ခံစားနေခဲ့ရတာတဲ့ ။ အိမ်ကလူတွေ ကန်စွန်းရွက်တွေတိုက် ၊ ဆရာဝန်ဆီခေါ်ဆေးထိုးကြတယ် ဆရာဝန်က စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါလို့ ပြောလိုက်တယ်တဲ့ ။ ကျနော်ပြန်ရောက်သွားတော့ အိတ်တွေအကုန်ပစ်ချပြီး သူ့ဆီသွားတယ် ။ သူကခေါင်းလေးထောင်ကြည့်တယ်ဗျ .. ကျနော့်မှာ သူသက်သာလာပြီမှတ်လို့ ပျော်လိုက်ရတာ… ပါးစပ်ကလည်း သူ့နာမည်တတွတ်တွတ်ခေါ်ပြီး စကားတွေပြောတာပေါ့ ။ မကြာပါဘူး ခနအကြောဆွဲပြီး ကလေးကသေသွားတယ် ။မေမေ က နင့်ကိုစောင့်နေရှာတာနေမှာလို့ပြောတော့ ငိုလိုက်ရတာ ….. သံယောဇဉ်တွေများဗျာ …တကယ်ကိုပူလောင်ရပါတယ်။